Radio Don Bosco - Andriano ny fahasalamana
Ny diabeta sy ny olana haterany
Lohahevitra : Andriano ny fahasalamana
Naseho ny : 6 novambra 2021
Feno 100 taona amin'ity taona ity ny nahitàna ny "insuline", izay singa iray amin'ny fitsaboana ny diabeta ary nahavotra olona maro. Ny 14 novambra 2021 izao no fanamarihana ny andro eran-tany ho an'ny diabeta ka ny lohahevitra dia ny hoe : Fisitrahana ny fanafody hitsaboana ny diabeta ; raha tsy izao, dia rahoviana indray. Misedra olana ny mararin'ny diabeta : tsy fahitàna fanafody sy fitaovana, tsy ampy ny fahafahana ara-bola. Voka-dratsy : lalan-dra tapaka, aretin'ny voa, AVC, fivalanan-rano matetika...
Naseho ny : 23 oktobra 2021
Tamin'ny sabotsy 16 oktobra 2021 no nanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny sakafo, indrindra ny ara-pahasalamana. Hita fa manana olana amin'ny lafiny fisakafoana ny olona ankehitriny. Ny atao hoe sakafo ara-pahasalamana dia voalanjalanja, mifanaraka amin'ny filàn'ny vatana sy ny asa andavanandro. Tao anatin'ny dimy na enina taona izay dia nampidirin'ny Ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tao anatin'ny tatitra fanaon'ny isam-bolana ny antotan'isan'ny olona tratry ny fahalebiazana loatra...
Naseho ny : 16 oktobra 2021
Ny fanarenana ara-batana dia hatao amin'ny alalan'ny fitsaboana "Kinésithérapie" na amin'ny alalan'ny fampiasana fihetsika. Ny teny hoe " Kinésithérapie" dia avy amin'ny voambolana roa : "Kinésis" midika ho fihetsika ary ny "thérapie" mira ho fitsaboana. Ireo olona hotsaboina amin'ny alalan'ity fomba iray ity dia matetika nandalo tamin'ny mpitsabo ary ity farany no manome taratasy mazava fa mila manao "kinésithérapie ilay marary, aorian'izay vao mandalo fanadihadiana amin'ny mpitsabo "kinésithérapeute"
Naseho ny : 9 oktobra 2021
Ny fery-fanaviana dia avy amin'ny tsimok'aretina iray izay mety hisy fiantraikany amin'ny taova hafa ankoatry ny hoditra na ny taovam-pananahana. Izy io dia mety hakasika ny ati-maso. Ny fery-fanaviana dia avy amin'ny tsimok'aretina, "Herpes Simplex Virus", na HSV, izay misy karazany 2: HSV1 sy HSV2...
Pejy 6 amin'ny 17